चिन्ता हटाउँने दिर्घकालिन र अल्पकालिन सामान्य तर उपयोगी ६ उपायहरु यस्ता छन् - उज्यालो पाटो
चिन्ता हटाउँने दिर्घकालिन र अल्पकालिन सामान्य तर उपयोगी ६ उपायहरु यस्ता छन्
सबै भन्दा पहिले चिन्ताका बारेमा कुरा गरौँ ।
चिन्ता अर्थात सन्ताप, पिर । मान्छे अनुसारको चिन्ता हुन्छन् । पिर मर्का हुन्छन् । दुखी नबनेको मान्छे यहाँ को होला र ? आशुका धारा नबहेका आँखा कस्का होलान र ? नदुखेको छात‍ी कस्को होला र ? यहाँ प्रत्येक मान्छे रोएका छन् ।
चिन्ता सर्वव्यापी छ । धनी होस् या गरिब, कालो होस् या गोरो, महिला होस् या पुरुष, सुगममा होस् कि दुर्गममा, सबै तिरका हरेक मान्छेमा चिन्ता छ । तर, सर्वव्यापी भएर पनि राम्रो कुरा होइन । चिन्ता त्यज्य हो । सकेसम्म चाँडो चिन्ता त्याग्न खोज्नु मान्छेको चाहना हो । मान्छे चिन्ता त्याग्ने बिषय र बिधीमा सदियौँ देखि चिन्तनशील छ तर चिन्ता जस्ताको त्यस्तै छ ।
उमेर अनुसार चिन्ताको किसिम र कारणहरु फरक हुन्छन् । एउटा विद्यालय जाँदै गरेको बालकको दिमागमा के खेल्छ ? पक्कै पनि उसमा पनि मानसिक तनाव सुसुप्त अवस्थामा लुकेर बसेको हुन्छ । स्कुलको होमवर्क नगर्दाको चिन्ता, वर्णमालाका अक्षर नरटेकोमा चिन्ता ।
युवा अवस्थामा फरक किसिमको जिम्मेवारी थपिन्छ । कर्तव्य थोपरिन्छ । जिन्दगीले एक किसिमको उकाली चढ्दै गर्दा यी यावत कुराहरुले मान्छेमा चिन्ता वा पिर थोपरदिन्छ । प्रेमिकाको पिर, बा–आमाको हेरचाह, समाज प्रतिको दायित्व, समाजले कुन नजरले हेर्छ भन्ने पिर ।
बृद्ध बन्दा अर्कै पिर हुन्छ । सन्ततिको पिर । नातीनातीनाको पिर । स्वास्थ्यको पिर । समय र मान्छेहरु आफु अनुसार नचलेको पिर । अशक्तताको पिर ।
एउटा अनुभवी जिन्दगी बाचिसक्दा पनि हामीलाई चिन्ताले छाड्दैन । दुख त हाम्रै वरिपरि हुन्छ । हाम्रै छेउछाउ हुन्छ । दुखको प्रमुख कारण खोज्न हामी कही जान पर्दैन । हामी आफै हौ दुखको प्रमुख कारक तत्व । आफैभित्र दुख जन्माएर आफै भित्र जल्छौ । प्रताडित बन्छौ । कोकोहोलो मच्चाउछौ ।
यसरी नि भन्न सकिन्छ कि – प्रत्येक पाइलामा पिरहरु छन् । गन्तव्यमा नपुगुञ्जेल बाटामा ढुङामाटामा ठेस लाग्ने हुन्छन् । आफै सोचेर जोगिएर हिड्न सिक्नुपर्छ । हामी पिर मान्दा मान्दै हास्न बिर्सन्छौ । खेल्दाखेल्दै, हिड्दा हिड्दै,पढ्दापढ्दै टक्क रोकिन्छौ र पिर गर्न थाल्छौ तर त्यसरी नै कुनै स्थानविहिन भएर, कारणविहिन भएर मुस्कुराउन सक्दैनौँ ।
एकादेशमा एकजना बडा प्रतापी राजा थिए । उनकी एकदमै राम्री पत्नी थिइन् । शिशिर र बसन्त नाम गरेका दुई छोरा थिए । उनले रानी र छोराहरुलाई असाध्यै प्रेम गर्थे । रानीको प्रेममा पनि खोट लगाउने ठाँउ थिएन । राजा सधैजसो शिकार खेल्न जान्थे ।
एकदिन उनी आफ्ना भारदारहरु लिएर शिकार खेल्न निस्किए । रानीलाई दिनभर दरबारमा बस्न अल्छी लाग्थ्यो । त्यै पनि नबस्नुको विकल्प हुन्थेन । घरी कहाँ पुग्थिन् त घरी कहाँ । मध्यान्हको समय थियो । रानी बत्ति कातिरहेकी थिइन । रानीका आखा एक्कासी भगेराका गुडमा पर्छन् । गुडका भगेरा रमाइरहेका थिए । हासिखुशी थिए । उसकी आमाले चुच्चोमा च्यापेर आहार ल्याएर ख्वाउथिन् । यो दृश्य रानीले रमाइलो मानेर हेरिरहेकी थिइन् ।
अर्को दिन कुनै शिकारीले आएर त्यो माउलाई मारिदियो । बच्चाहरु कराउन लागे । भोलीपल्ट पनि त्यही पुर्ववत् ठाउमा रानी बसिरहेकी थिइन । भालेले अर्कै सौतेनी पोथी ल्याइसकेछ । गुडमा रहेका बच्चालाई चुच्चाले च्यापेर बाहिर फालिदिई । यो देखेर रानीलाइ एकदमै बिझ्यो । उनले सोचिन् कि म मरेपछि राजाले पनि यसै गर्नेछन् । मेरा छोराहरुको पनि यही हालत हुनेछ । उनलाई यही कुराको चिन्ता लाग्न थाल्यो । राजाले कसै गरि ढाडस दिदा पनि उनले चिन्ता लिन छाडिनन् । र, त्यही चिन्ताले उसलाई चितामा पुर्यायो ।
मथिको कथाले भन्न खोजेको के हो भने अधिक चिन्ताले पनि मान्छेलाई हानी गर्छ । चिन्ताले समाधान निकाल्दैन । उल्टो चिन्ताले समाधानसम्म पुग्नबाट रोक्छ । सोच्न सक्ने क्षमतामा भाँझो हाल्छ ।
त्यसो भए के गर्ने त ?
यसको एउटै र सरल जवाफ छ, चिन्ता नलिने । परिस्थितिलाई स्विकार्ने । कुराहरु बिग्रिए झन् पाठ सिकेर झन् बलियो भएर उभिने । यसको अर्को विकल्प नै छैन । भनिन्छ, मान्छे रुख जस्तो भएर उभिनु पर्छ । कुनै हालतले ढलिहालेमा फेरि बिउ फैलाएर झांगिनु पर्छ ।
यो भयो दिर्घकालिनरुपमा आनन्दमा बस्ने तरिका । यदि तपाईलाई चिन्ताले तनाव दियो भने तपाई आत्तिनु हुनेछ । त्यसलाई अंग्रेजीमा एन्जाइटी भनिन्छ । त्यस्तो अवस्थाबाट पार पाउँनका लागि तपाईले तलका कामहरु गर्न सक्नु हुनेछ ।
मुस्कुराउँनु पर्ने कारणहरु खोजी नराख्नुहोस् । साना भन्दा साना कुराहरुमा मुस्कुराउँनु होला । कोही मान्छे जस्तै परिचित वा अपिरिचित भेट्नु भयो भने पनि मुस्कुराएर हेर्नुहोस् । अध्ययनहरुले देखाए अनुसार मुस्कुराइरहने मानिसहरुमा तनाव उत्पन्न गर्ने हर्मोन कम उत्पादन हुन्छ र ति खुसी हुन्छन् ।
२. गहिरो स्वास लिनुहोस्
एक्कासी तनाव बढेमा आँखा बन्द गर्नुहोस् र लामो तथा गहिरो स्वास लिनुहोस् । सामान्य अवस्थामा पनि बेला बेला लामो तथा गहिरो स्वास लिने गरेमा तनाव कम हुने गर्छ । लामो तथा गहिरो स्वास लिने गर्दा मनमा नकारात्मक भावनाहरु आउँन पाउँदैनन् ।
३. चुइगम चपाउँनुहोस्
अष्ट्रेलियाको स्विनबर्न युनिभर्सिटीका प्रोफेसर एन्ड्रयू सोलेले गरेको अध्ययनमा चुइगम चपाउँनाले एन्जाइटी कम गर्ने तथा तनाव मत्थर पार्ने देखाएको थियो ।
४. योग, ध्यान तथा कसरत गर्नुहोस्
योग, ध्यान तथा कसरत गर्दा शरिरमा रक्तसञ्चार राम्रो हुन्छ । स्वस्थ शरिरमा हर्मोनहरुको उत्पादन सन्तुलित रहन्छ । त्यस्तै, योग, ध्यान तथा कसरतले ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्याउँनाले नकारात्मक विचारहरु आउँन कम गर्छ ।
५. साथी वा नजिकका नातेदारलाई फोन गर्नुहोस्
यदि तपाई तनावले आत्तिनु भयो अथवा, एन्जाइटीले आक्रमण गर्यो भने तत्कालै साथी वा नजिकका नातेदारसँग कुरा गर्नुहोस् । तपाईले आफ्नो अवस्था बताउँने भन्दा पनि अन्य साधारण वातचित गर्नु भयो भने पनि तनाव घट्न सहयोगी हुन्छ ।
६. अंकमाल गर्नुस् वा चुम्बन गर्नुस्
अंकमाल गर्दा अक्सिटोसिन उत्पन्न हुन्छ जसले दिमागमा शान्ति दिन्छ । त्यस्तै, चुम्बनले मष्तिस्कमा इन्डोर्फिन्स उत्पादन गरेर पनि तनाव कम गराउँछ ।
यति कुराहरु याद राखेर चिन्ता कम गर्दै हामीले स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छौँ ।
तपाईलाई यो लेख कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । हाम्रो उज्यालो पाटोको फेसबुक पेज वा वेबसाइटमा तपाईले यस्ता थप लेखहरु पाउँन सक्नु हुनेछ ।
७ नियमहरु जसले जीवन सजिलो बनाउँछन्
सृजनशील कसरी हुने ? आफ्नो उत्पादकत्व कसरी बढाउँने ? उपयोगी काइदाहरु
अभिभावकले यति सामान्य कुरा याद नगर्दा बच्चाको जीवनभर अभिसाप बन्छ
यी ५ किताबहरु जसले लकडाउनको समय सदुपयोग गरेको निश्चित पार्छन्
तस्विर कसरी आफै बोल्छ ? विचार कसरी बन्छ ?
गुगलबाट तानेर फेसबुकमा लेखेर ज्ञान देखाउँनेहरु ढोङ्गी कि ज्ञानी ?
कतै तपाई ‘सेल्फ सेन्सरसिप’बाट ग्रसित त हुनुहुन्न ? यसरी थाहा पाउँनुहोस्
विनम्रता अरुका लागि मात्र पनि होइन, आफ्नै लागि पनि उपहार हो – गोपालदाईको कथा सहित
सुखी बन्न याद गर्नु पर्ने १० व्यवहारिक कर्महरु यति सजिला छन्
आफैलाई विश्वास गर्न सिकौं – सन्दर्भ कथा सहित
पाठ्यक्रम बाहिरका कुरा किन पढ्ने ? ७१ बर्षे काकीको कथा र ५ कारणहरु